Tuberculosis (တီဘီရောဂါ) - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 16/10/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အဆုတ်တီဘီ ဆိုသည်မှာ တစ်ရှူးများကို တိုက်ခိုက် ဖျက်စီးတတ်သော ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်မှု တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ထို ဘက်တီးရီးယားကိုMycobacterium tuberculosis (MTB) ဟုခေါ်ပြီး လေထဲမှတစ်ဆင့် ကူးစက် ပျံ့နှံ့ပါသည်။ လူအတော်အများသည် ငုပ်နေသော အဆုတ် တီဘီရောဂါကို ခံစားရပါသည်။ လူနာ၏ကျန်းမာရေး အပေါ် မူတည်၍ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု (သီတင်းပတ် အနည်းငယ် မှ နှစ်အတန်ကြာ) ကြာပြီးနောက် တီဘီရောဂါပိုး သည် ရောဂါလက္ခဏာများကို စတင်ဖြစ်ပွားစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူနာ သည် ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ၊ ကင်ဆာ သို့မဟုတ် ကင်ဆာဆေးကုထုံးခံယူနေခြင်း စသော ကိုယ်ခံအားနည်းစေသောအကြောင်းရင်းများ ရှိပါက တီဘီရောဂါသည် ပို၍လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပွားပါသည်။ ရောဂါသည် အဆုတ်ကို ထိခိုက် နေပြီး အရိုး၊ ပြန်ရည်ကျိတ်၊ ပင်မအာရုံကြော အဖွဲ့အစည်း၊ နှလုံး နှင့် အခြားအင်္ဂါများသို့ ပျံ့နှံ့ နိုင်ပါသည်။
အဆုတ်တီဘီရောဂါ သည် ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ။
ကိုယ်ခံအားနည်းသောလူများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားရန် ကြာချိန်သည် တိုတောင်းပါသည်။ ရောဂါအဆင့်တိုးလာပြီး တီဘီသည် အလွယ်တကူ ပျံ့နှံ့ ပါသည်။ အောက်ပါလူများသည် အဆုတ်တီဘီရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်ပါ သည်။
ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ သို့မဟုတ် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်း စေသော ရောဂါ ရှိခြင်း
တီဘီလူနာများကို စောင့်ကြည့်ရသူများ၊ ဥပမာ- ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ
တီဘီ လူနာများရှိသော နေရာတွင် နေထိုင်ခြင်း နှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဥပမာ ဆေးခန်းများ၊ ဒုက္ခသည် စခန်းများ။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ချို့တဲ့သောနေရာများ တွင် နေထိုင်သောသူများ
အရက် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေး သုံးခြင်း
တီဘီအဖြစ်များသောနေရာများသို့ ခရီးသွားခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေရာများဖြစ်သော လက်တင် အမေရိက၊ အာဖရိက၊ အာရှ၊ ဥရောပ အရှေ့ပိုင်း နှင့် ရှရှား တို့ပါဝင်သည်။
အဆုတ်တီဘီရောဂါ ၏ ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာလဲ။
တီဘီရောဂါပိုးစဝင်ပြီး လက္ခဏာမပြသေးခင် ကြားချိန် တွင် သင်သည် ပုံမှန်ဟု ခံစားရ မည်။ လူနာအများစုသည် ဤအဆင့်တွင် ရောဂါလက္ခဏာ မပြသလို ရောဂါလည်း မပျံ့နှံ့ပါ။ ရောဂါစ ဖြစ်ပါက ရောဂါ လက္ခဏာ များ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထိခိုက်သော အင်္ဂါပေါ် မူတည်၍ ရောဂါလက္ခဏာများသည် ချောင်းဆိုး ခြင်း (အနည်းဆုံး ၃ပတ်လောက်)၊ သလိပ်ထွက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးရာ တွင် သွေးပါခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ညဘက် ချွေးပြန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ် နည်းခြင်း၊ မောပန်းခြင်း နှင့် အားနည်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ တီဘီ ရောဂါလက္ခဏာများသည် အခြား အဆုတ်နှင့် ဆိုင်သော ရောဂါများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထားသော အခြားလက္ခဏာ များ လည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခုများရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန် နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
သင့်တွင် အဖျားတက်ခြင်း၊ ရှင်းမပြနိုင်အောင် ကိုယ် အလေးချိန် ကျခြင်း နှင့် ညဖက်ချွေးပြန်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။ အထူးသဖြင့် ၃ပတ်ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုးခြင်း ရှိပါက တီဘီကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း သည် တီဘီ၏ ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်သော်လည်း အခြား ရောဂါများ၏ ရောဂါလက္ခဏာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို အတည်ပြုနိုင်ရန် ဆရာဝန် သည် စစ်ဆေးမှု များ ပြုလုပ်ပါမည်။
သင့်ဆီတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေပါက သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခု ရှိနေပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓါကိုယ် တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ခြင်းသည်သင်၏အခြေအနေကောင်းမွန်ရန်အတွက်အကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
အဆုတ်တီဘီရောဂါ ကိုဘာတွေက ဖြစ်စေသလဲ။
Mycobacterium tuberculosis (MTB) ဟူသော ဘက်တီးရီယားကြောင့် ဖြစ်စေပြီး လေထဲမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့ ပါသည်။ ချောင်းဆိုးခြင်းဖြင့် လေထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားသော ဘက်တီးရီးယားကို ရှူသွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ဗိုင်းရပ်စ် သည် မလှုပ်ရှားတော့ပါ။ ထိုအချိန်ကို ရောဂါငြိမ်နေချိန် ၊ အစပျိုးရန်ကြာချိန် ဟု ခေါ် ပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်သည် မထကြွသောကြောင့် ရောဂါ လက္ခဏာများ မရှိပါ။ ကူးစက်ခြင်းလည်း မရှိပါ။ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါက ရောဂါလက္ခဏာ မပြသော်လည်း ဗိုင်းရပ်စ် ရှိ ကြောင်း အဖြေထွက်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍သိရှိပါက တီဘီရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ကိုသိသာစွာ လျော့ချနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း MTB ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သော လူ ၁၀ ယောက်တွင် ၁ယောက်သာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ် သည် ကိုယ်ခံအားက မတိုက်ခိုက်နိုင်သော အချိန်တွင် ခန္ဓါကိုယ်အား တိုက်ခိုက်ပါသည်။ ကိုယ်ခံအား စနစ် အားနည်းသော အချိန် ( အသက်ကြီးသူများ၊ HIV ရှိသူများ) ကို စောင့်၍ တိုက်ခိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါဖြစ်ရန် ကြာသောအချိန်သည် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ကွဲပြား ပါသည်။ ရောဂါစဖြစ်ပါက ဗိုင်းရပ်စ်သည် အဆုတ်နှင့် သွေး ကြောများ တွင်ကြီးထွားလာကာ ခန္ဓါကိုယ် အခြားနေရာများ သို့ ပြောင်းရွှေ့ပါသည်။
ဘယ်အရာတွေက အဆုတ်တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့် စေ ပါသလဲ။
အချို့အချက်များသည် အဆုတ်တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို မြင့်တက်စေပါသည်။ အဓိကအချက်မှာ ကိုယ်ခံအားစနစ် နည်းခြင်း ဖြစ်ပြီး အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
လေးဖက်နာရောဂါ၊ Crohn’s ရောဂါ (အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းသောရောဂါ)နှင့် ဆိုရီရေးစစ် အရေပြား ရောဂါ များကို ကုသသော ဆေးများ သောက်ခြင်း
ဖြစ်ပွားနှုန်းကို မြင့်စေသော အချက်များ သင့်မှာ မရှိခြင်းသည် သင် ရောဂါမဖြစ်နိုင်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤအချက်များသည် ကိုးကားချက်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များ အတွက် အထူးကု ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ယခု ဖော်ပြ ထားသည့် အချက်အလက် များမှာ ဆေး ပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေး ချက် များ နေရာ တွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက် သိရှိလို သော အချက်အလက်များအတွက် သင့်၏ ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။
အဆုတ်တီဘီရောဂါ ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြု မလဲ။
သင့်တွင်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ဆက်တိုက်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် အဖျားတက်ခြင်း တို့ဖြစ်နေလျှင် အဆုတ်တီဘီရောဂါ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် သင်နေထိုင်သော အလုပ်လုပ်သော နေရာနှင့် သင်ထိတွေ့ရ သောလူများ အကြောင်းကို မေးပါလိမ့်မည်။ တီဘီ ကူးစက်ခြင်း၏ ရင်းမြစ် ကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်သည် တီဘီအရေပြား စစ်ဆေးခြင်း ကို လုပ်ဆောင် ပါမည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်စေသော အချက်များ (အထူးသဖြင့် HIV)၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားခြင်း နှင့် အပြင်ဘက် အလုပ်များ သည် ရောဂါအဖြေရှာခြင်းကို ဆုံးဖြတ် ပေးနိုင်ပါ သည်။
အဆုတ်တီဘီရောဂါပိုး တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်း (PPD) ဖြင့် အရေပြားကို စမ်းသပ်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ တီဘီ ဖြစ်စေသည့် ဘက်တီးရီးယားပိုးပါဝင်သော ပရိုတိန်း အနည်းငယ်ကို လက်မောင်းအောက် အရေပြားတွင်း သို့ ထိုး သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၄၈-၇၂ နာရီအတွင်း ရောင်လာ သော အစက်နေရာကို တိုင်းတာပါသည်။ ထိုးလိုက်သော နေရာမှ ရောင်လာသော အစက် အရွယ် အစားသည် ရောဂါပိုးရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ စစ်ဆေးမှုသည် အပေါင်းလက္ခဏာထွက်နေလျှင် သင့်မှာ တီဘီပိုးကူးစက်ခံရဖူးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဆရာဝန်သည် MTB ဗိုင်းရပ်စ် ရှိသလားစစ်ရန် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နှင့် သလိပ်၊သွေး သို့မဟုတ် ဆီးနမူနာ ယူခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ HIV စစ်ခြင်း လည်း ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။
အဆုတ်တီဘီရောဂါ ကို ဘယ်လိုကုသမလဲ။
အဆုတ်တီဘီရောဂါ ကို လွယ်ကူစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ ဆေး ၆လ သို့မဟုတ် ပိုကြာစွာ သောက်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။ ကုသမှု တွင် ပဋိဇီဝဆေး နေ့စဉ် ၃-၄ ကြိမ်သောက်ရန် လည်း ပါဝင်ပါသည်။ သီတင်းပတ် အနည်းငယ်တွင် သက်သာမှု ခံစားရပါမည်။ သို့သော်လည်း ရောဂါသည် ပြန်ဆိုးလာနိုင်ပါ သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများ ပျောက်သွားသော်လည်း ကုသမှု ကို အပြည့်ခံယူရန် အရေးကြီး ပါသည်။ ဆေးသောက်ခြင်း ကို အချိန်မပြည့်မီ ရပ်တန့်လိုက်ပါက ဘက်တီးရီးယားသည် ခန္ဓါကိုယ်ထဲတွင် ကျန်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ တီဘီပြန်ဖြစ်သော အခါ ခန္ဓါကိုယ်၏ အခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့ ပါသည်။ သင်နှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့ရသူများ နှင့် မိသားစု ဝင်များကိုလည်း ဆေးစစ်ကြည့်သင့်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် အဆုတ်တီဘီရောဂါ ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် အဆုတ်တီဘီရောဂါ ဖြစ်ခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာ ဆေး သောက်ပါ။
အချိန်ဇယားအတိုင်း ဆေးကိုထား၍ သောက်ပါ။
ဆေး၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်အား မေးပါ။
အခြားလူများသို့ ရောဂါမကူးစေရန် သတိပြုပါ။
တစ်ကိုယ်ရည် ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှုအတွက် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည်များကို လိုက်နာပါ။
အဖျားတက်ခြင်းနှင့် ချမ်းတုန်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက ဆရာဝန် နှင့်ပြသပါ။ ဆေး၏ အကျိုးဆက်များကို သိချင်ပါက၊ ဆေးသောက်နေစဉ် ရောဂါလက္ခဏာ များ ဆက်ရှိနေပါက သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာပါက၊ ချောင်းဆိုးရာတွင် သလိပ် သို့မဟုတ် သွေးပါလာပါက ဆရာဝန် နှင့်ပြသပါ။
Porter, Robert. Kaplan Justin. Homeier Barbara. The Merck manual home health handbook. New Jersey: John Wiley &amp; Sons, Inc, 2009. Print edition. Pagana, Kathleen D, and Timothy J. Pagana. Mosby&#39;s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. St. Louis, Mo: Mosby/Elsevier, 2010. Print edition. Page 1194.